Ruka 22 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 22:1-71
Vapristi vanorangana kuuraya Jesu (1-6)
Kugadzirira Paseka yekupedzisira (7-13)
Kudya kwaShe Kwemanheru kunotangwa (14-20)
‘Mutengesi wangu aneni patafura’ (21-23)
Nharo dzakaomarara dzekuti ndiani mukuru (24-27)
Sungano yaJesu yeumambo (28-30)
Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (31-34)
Kukosha kwekugadzirira; mapakatwa maviri (35-38)
Munyengetero waJesu muGomo reMiorivhi (39-46)
Jesu anosungwa (47-53)
Petro anoramba Jesu (54-62)
Jesu anosekwa (63-65)
Anotongwa neSanihedrini (66-71)
22 Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso, unonzi Paseka,+ wakanga wava kusvika.+ 2 Uye vatungamiriri vevapristi nevanyori vaitsvaga kuti vomuuraya sei,+ nekuti vaitya vanhu.+ 3 Satani akabva apinda muna Judhasi, uya ainzi Iskariyoti, akanga ari mumwe wevane Gumi Nevaviri,+ 4 uye akaenda, akataura nevatungamiriri vevapristi nevakuru vakuru vetemberi pamusoro pekuti angamutengesa sei kwavari.+ 5 Vakafara nazvo, vakawirirana kuti vaizomupa mari yesirivha.+ 6 Saka akabvumirana nazvo, akatanga kutsvaga mukana wakanaka wekumutengesa kwavari pasina vanhu vakawanda. 7 Zuva rekutanga reChingwa Chisina Mbiriso rakazosvika, paifanira kubayirwa chibayiro chePaseka;+ 8 saka Jesu akatuma Petro naJohani, achiti: “Endai munotigadzirira Paseka kuti tidye.”+ 9 Ivo vakati kwaari: “Munoda kuti tinoigadzirira kupi?” 10 Iye akati kwavari: “Onai! Pamunopinda muguta muchasangana nemurume akatakura chirongo chemvura. Muteverei mumba maanopinda.+ 11 Muti kumuridzi wemba, ‘Zvanzi neMudzidzisi: “Imba yevaenzi yandingadyira Paseka nevadzidzi vangu ndeipi?”’ 12 Murume iyeye achabva akuratidzai imba huru yepamusoro ine zvinhu zvekushandisa. Igadzirirei imomo.” 13 Saka vakaenda, vakazviwana zvakangoita sezvaakanga avataurira, vakagadzirira Paseka yacho. 14 Saka nguva yacho payakakwana, akagara patafura nevaapostora.+ 15 Uye akati kwavari: “Ndanga ndakamirira chaizvo kudya Paseka iyi nemi ndisati ndatambura; 16 nekuti ndinokuudzai kuti, handizoidyizve kusvikira yazadziswa muUmambo hwaMwari.” 17 Uye akatambira kapu, akaonga, akati: “Itorei mutambidzane mese, 18 nekuti ndinokuudzai kuti, kubvira zvino handichanwi zvakare zvibereko zvemuzambiringa kusvikira Umambo hwaMwari hwauya.” 19 Akatorawo chingwa,+ akaonga, akachimedura, akavapa, achiti: “Ichi chinomirira muviri wangu,+ uchapiwa kuitira imi.+ Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.”+ 20 Akaitawo izvozvo nekapu pavakanga vapedza kudya kwemanheru, achiti: “Kapu iyi inomirira sungano itsva+ muropa rangu,+ ramuchadururirwa.+ 21 “Asi onai! ruoko rwemutengesi wangu runeni patafura.+ 22 Nekuti Mwanakomana wemunhu ari kuenda zvake sezvakagara zvataurwa;+ kunyange zvakadaro, ane nhamo munhu iyeye anomutengesa!”+ 23 Saka vakatanga kutaurirana pakati pavo kuti angava ani akanga ava kuda kuita zvakadaro.+ 24 Zvisinei, pakamuka nharo dzakaomarara pakati pavo pamusoro pekuti ndiani aitorwa semukuru pane vese.+ 25 Asi akati kwavari: “Madzimambo emamwe marudzi anozviita madzishe paari, uye vaya vane simba pamusoro pawo vanonzi Vabatsiri.+ 26 Asi imi hamufaniri kudaro.+ Mukuru pakati penyu anofanira kuva semudiki pane vese,+ uye uya ari kutungamirira anofanira kushandira vamwe.* 27 Nekuti mukuru ndeupi, uya akagara patafura kana kuti uya ari kumuunzira zvekudya?* Haasi uya akagara patafura here? Asi ini ndiri pakati penyu seuya ari kukuunzirai zvekudya.*+ 28 “Kunyange zvakadaro, imi ndimi makaramba muineni+ mumiedzo yangu;+ 29 uye ndinoita sungano nemi, saBaba vangu vakaita neni sungano yeumambo,+ 30 kuti mudye nekunwa patafura yangu muUmambo hwangu,+ mugare pazvigaro zveumambo+ muchitonga madzinza 12 aIsraeri.+ 31 “Simoni, Simoni, ona! Satani akati ari kuda kuva nemi mese kuti akupepetei segorosi.+ 32 Asi ndakakunyengeterera ndichiteterera kuti kutenda kwako kurege kupera;+ uye iwe, kana wangodzoka, simbisa hama dzako.”+ 33 Iye akabva ati kwaari: “Ishe, ndakagadzirira kuenda nemi kujeri nemurufu.”+ 34 Asi iye akati: “Petro, ndinokuudza kuti, jongwe harizoriri nhasi usati waramba katatu kuti unondiziva.”+ 35 Akatiwo kwavari: “Pandakakutumai musina chikwama nehomwe yekuisira zvekudya, neshangu,+ pane chamakashayiwa here?” Ivo vakati: “Hapana!” 36 Akabva ati kwavari: “Asi iye zvino ane chikwama ngaachitore, uye ngaatorewo homwe yekuisira zvekudya, uye uya asina bakatwa ngaatengese nguo yake yekunze aritenge. 37 Nekuti ndinokuudzai kuti zvakanyorwa zvinofanira kuitika kwandiri, zvekuti, ‘Akaverengwa pamwe chete nevasingateereri mutemo.’+ Nekuti zvine chekuita neni zviri kuzadziswa.”+ 38 Ivo vakabva vati: “Ishe, onai! pane mapakatwa maviri.” Iye akati kwavari: “Iwaya akwana.” 39 Paakabuda, akaenda kuGomo reMiorivhi sezvaaiwanzoita, uye vadzidzi vakamuteverawo.+ 40 Pavakasvika panzvimbo yacho, akati kwavari: “Murambe muchinyengetera, kuti murege kupinda mumuedzo.”+ 41 Iye akabva pavaiva akaenda chinhambwe chinosvika dombo rikakandwa, akapfugama, akatanga kunyengetera, 42 achiti: “Baba, kana muchida, bvisai kapu iyi kwandiri. Kunyange zvakadaro, ngakurege kuva kuda kwangu, asi kwenyu.”+ 43 Ngirozi yakabva yazviratidza kwaari ichibva kudenga, ikamusimbisa.+ 44 Asi aitambudzika zvikuru zvekuti akaramba achinyengetera nemwoyo wese;+ uye ziya rake rakava semadonhwe eropa richidonhera pasi. 45 Paakasimuka kubva paainyengetera, akaenda kwaiva nevadzidzi, akavaona vachitsimwaira, vapera simba nekutambudzika kwavaiita.+ 46 Akati kwavari: “Muri kurarirei? Mukai murambe muchinyengetera, kuti murege kupinda mumuedzo.”+ 47 Paakanga achiri kutaura, vanhu vakawanda vakabva vasvika, uye murume ainzi Judhasi, mumwe wevane Gumi Nevaviri, ndiye aivatungamirira. Akabva aswedera kuna Jesu kuti amutsvode.+ 48 Asi Jesu akati kwaari: “Judhasi, uri kutengesa Mwanakomana wemunhu nekutsvoda here?” 49 Vaya vakanga vainaye pavakaona zvakanga zvava kuda kuitika, vakati: “Ishe, torwisa nemapakatwa here?” 50 Mumwe wavo akatocheka muranda wemupristi mukuru, nzeve yake yekurudyi ikabva.+ 51 Asi Jesu akapindura achiti: “Zvakwana.” Akabata nzeve yacho, akamuporesa. 52 Jesu akabva ati kuvatungamiriri vevapristi nevakuru vakuru vetemberi nevakuru vakanga vamuvinga ikoko: “Ko ndava gororo here zvamauya muine mapakatwa netsvimbo?+ 53 Pandaiva nemi mutemberi zuva nezuva+ hamuna kumbobvira mandibata wani.+ Asi ino inguva yenyu uye nguva yekuti rima ritonge.”+ 54 Vakabva vamusunga, vakaenda naye,+ ndokupinda naye mumba memupristi mukuru; asi Petro akanga achitevera ari nechekure zvishoma.+ 55 Pavakabatidza moto pakati pechivanze, ndokugara pamwe chete, Petro aivawo pakati pavo.+ 56 Asi mumwe mushandi wechisikana akamuona muchiedza chemoto, akanyatsomutarisa, akati: “Murume uyu aivawo naye.” 57 Asi iye akaramba, akati: “Iwe mukadzi, handimuzivi ini.” 58 Pasina nguva mumwe munhu akamuona akati: “Newewo uri mumwe wavo.” Asi Petro akati: “Iwe murume iwe, handisi ini.”+ 59 Uye pashure peinenge awa, mumwe murume akaramba achisimbirira achiti: “Chokwadi murume uyu aivawo naye, nekuti iye anotova muGarireya!” 60 Asi Petro akati: “Iwe murume iwe, handizivi zvauri kutaura ini.” Pakarepo, achiri kutaura kudaro, jongwe rakabva rarira. 61 Ishe akabva atendeuka, akatarisa Petro, uye Petro akabva ayeuka mashoko aShe paakati kwaari: “Jongwe risati rarira nhasi, uchandiramba katatu.”+ 62 Uye akabuda panze, akachema zvinosiririsa. 63 Varume vakanga vasunga Jesu vakatanga kumunyomba,+ vachimurova;+ 64 vakamufukidza kumeso uye vaimubvunza vachiti: “Profita! Ndiani akurova?” 65 Uye vakataura zvimwe zvakaipa zvakawanda kwaari vachimhura. 66 Pakwakazoedza, dare revakuru vevanhu, kureva vatungamiriri vevapristi nevanyori, rakaungana,+ rikaenda naye muimba yavo yeSanihedrini, ndokuti: 67 “Kana uri iwe Kristu,+ tiudze.” Asi iye akati kwavari: “Kunyange kana ndikakuudzai, hamuzombozvitendi. 68 Zvakare, kana ndikakubvunzai, hamungambopinduri. 69 Asi kubvira zvino Mwanakomana wemunhu+ achange akagara kuruoko rwaMwari rwerudyi rune simba.”+ 70 Vese vakabva vati: “Saka uri Mwanakomana waMwari here?” Iye akati kwavari: “Imimi ndimi muri kutaura kuti ndini.” 71 Ivo vakati: “Tichadireizve humwe uchapupu? Nekuti tazvinzwira tega kubva mumuromo make.”+
^ Kana kuti “kushumira vamwe.”
^ Kana kuti “kumushumira.”
^ Kana kuti “kukushumirai.”